ကြွက် မနိုင် ကျီ မီးနဲ့ရှို့ နေတာများလား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကြွက် မနိုင် ကျီ မီးနဲ့ရှို့ နေတာများလား။
ကြွက် မနိုင် ကျီ မီးနဲ့ရှို့ နေတာများလား။
Posted by ba gyi on Oct 1, 2011 in Copy/Paste |6comments
မနေ့က တို့ပြည်သူတွေ ဧရာဝတီအရေးသမ္မတကြီးရဲ့မေတ္တာတေးကြားရပြီး ပျော်လိုက်ကြ ရေးလိုက်ကြနဲ့၊ ဟော—- သည်ကနေ့လည်းကျရော ၊ မီးပျက်တာ မှ ဟိုးအရင် အဆိုးဆုံးအခြေအနေတုန်းကလို- ရုတ်ချည်းပြန်ဖြစ်သွားတာ— ဘာ့ကြောင့်လည်း၊ ကိုယ့်သမ္မတကြီးကိုတော့ ကိုယ်ယုံပါတယ်——- ဒါပေမည့် ? zzzzzzzzzzz ရွာသားတွေ
တွေးကြပါတော့ ကွယ် ။
စကားကြပ် ။ ။ တို့ဝန်ကြီး မောင်ဇော်မင်း ကလေးကလည်းလျှပ်စစ်တွေ ပိုလျှံနေတယ် ပြောထားလျှက် ကနဲ့-( တိန် )၊ အပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး- အဖြစ်ပြောတာပါကွယ်။
ဦးဇော်မင်းကတော့ သမ္မတကြီးရဲ့သ၀ဏ်လွှာကို ကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူး ။ ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပြီးအောင်လုပ်မယ်လို့ ပြောထားတယ်လေ ။ ခုတော့ သူလည်းအရှက်ကွဲပြီပေါ့ ။ ပိုစ့်လေးကကောင်းပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တိုလွန်းနေတယ် ။ ဖတ်ရတာအားမရဘူး ။ နောက်ဆိုရင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးတင်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့.. ၀န်ကြီးက.. သမ္မတရဲ့ပေါ်လစီမကျေနပ်ရင်..အလုပ်ကနှုတ်ထွက်ယုံပါပဲ..။
စစ်တပ်ဆိုတာ.. အမိန့်နာခံမှုနဲ့ ဖွဲ့ထားတာမို့.. စစ်သားဟောင်းကြီးတွေ.. ၀န်ကြီးရာထူးယူတဲ့အခါမှာ.. အထက်အမိန့်.. စောကတတက်ရဲမယ်တော့.. မထင်ရေးချ…. မထင်..။
ကိုယ့်စွမ်းအားအရည်အချင်းနဲ့.အရင်းအမြစ်နဲ့.. လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလည်း ပြည်တွင်းလိုအပ်မှု.. လုံလုံလောက်လောက်မထုတ်နိုင်..
သူများနိုင်ငံက ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှုလည်း.. သဘာဝဂေဟအပျက်မခံ. လက်မခံရင်တော့…
အမှောင်ထဲ. .နေနိုင်စွမ်းကို.. လေ့ကျင့်ထားကြဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်…။
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဆိုတာ.. သိကြားမင်းက.. မိုးပေါ်ကနေ.. မိုးကြိုးပစ်ချပြိးပေးနေတာမဟုတ်…။
ဒီကမရရင်.. ဘယ်ကထုတ်ယူမလည်း ဆိုတာလည်း.. စဉ်းစားကြရလိမ့်မယ်..။
၀န်ကြီးဦးဇော်မင်းလည်း ပြုတ်မှာ အသေချာပဲဗျို့ ။
အို ငဇော်မင်းရဲ့ 
မင်းမလဲ သားမယားတွေ နဲ့ 
ငါတို့ မလဲ မအားယားပါကွယ့်
အိမ်တွင်းရေးတွေ အသာထားပါလို့ 
မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စပြီးသွားရင်. ရခိုင်ကကိစ္စဆက်ရလိမ့်မယ်။တနိုင်ငံလုံးပိုင်တဲ့ သယံဇာတတွေက သူတို့ ဘဲပိုင်သလိုနဲ့ အားလုံးစာချုပ်
နဲ့ အပြီးရောင်းထားပြီးသားမို့ နည်းနည်းလေးတောင်မှ ပြည်တွင်းမှာမသုံးစွဲနိုင်ပါဘူးတဲ့။ကိုယ့်ပြည်နယ်ထဲက ထွက်တဲ့ ရတနာတွေကိုတောင်းတာပါ။
အကုန်မတောင်းပါဘူး။နည်းနည်းလေး ဒီဒေသရဲ့ စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးမှာ သုံးစွဲပေးဖို့ တောင်းဆိုတာကို
သူတို့ အိတ်ထဲကစိုက်ပေးရမလို တွန့် တိုနေလိုက်ကြတာ။စိတ်ပျက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရမ်းဗြဲကျွန်းနားမှာ အရင်နှစ်တွေကဆိုနှစ်တိုင်းလို နဂါးမီးတောက်တယ်ဆိုတာ ညအချိန်တွေမှာဖြစ်လေ့ရှိတယ်ဗျ ။ ရေထဲကနေမီးလုံးကြီးတွေတက်လာတာလေ ။ ဒေသခံတွေကတော့ နဂါးမီးတောက်တယ်ပေါ့ဗျာ ။ ပညာရှင်တွေကတော့ ရေအောက်မှာရှိတဲ့ ရေနံစိမ်းတွေနဲ့သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေ ရေပေါ်ကိုတက်ပြီးပေါက်ကွဲတာတဲ့ဗျ ။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ အဲလိုနဂါးမီးတောက်တာမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ဗျ ။